IKHETHEKILEYO: UTESSA GRÄFIN VON WALDERDORFF WOMTSHATO WESKETCH NENKCUKACHA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Umfazi kaBarron Hilton u-Tessa Gräfin von Walderdorff Wanxiba ilokhwe yomtshato eChongiweyo ngaManzi: Jonga uMdwebo
Umfazi kaBarron Hilton u-Tessa Gräfin von Walderdorff Wanxiba ilokhwe yomtshato eChongiweyo ngaManzi: Jonga uMdwebo
(Ityala: UNicky Hilton / Instagram)
Ngu: Esther Lee 06/06/2018 kwi-2: 10 PM
Yintoni ikumkanikazi yehotele yexesha elizayo oza kuyinxiba ngosuku lwakhe lomtshato? Impendulo ye I-Tessa Countess von Walderdorff , Otshate indlalifa yehotele UBarron Hilton eSt.
I-Socialite esekwe kwisiXeko saseNew York, ekuthiwa ivela kwimvelaphi yeJamani, ikhangeleka intle kwisinxibo esinde esinemikhono yendlovu esine-tulle kunye nentsimbi. UMsunguli weWatters kunye ne-CEO IVatana Watters uxela Ingcaciso indlela uphawu lwakhe olugqibe ngayo ukunxiba uValderdorff kuhlobo lwesiko lweMihr tulle kunye ne-organza ballgown.
Emva kokubona nokuzama iilokhwe ezingenakubalwa, akukho nto yayibonakala ilungile de umtshakazi, uTessa kunye nesitayile sakhe, uNilüfer Satorius wabeka amehlo abo kwiWatters 'Mihr gown, watters. UTessa wayethanda isiketi esinevolumu kunye nentsimbi ethambileyo egubungela i-bodice.
Isiqwenga, esifumaneka ukuthengwa phantse kwi- $ 4,000, singenamikhono, sifakwe esinqeni, kwaye sibonisa i-V-intamo engacacanga kunye ne-V-back enzulu. I-ballgown ibandakanya isiketi se-A-line esine-voluminous esihla saya kuloliwe omncinci. Isiketi sasiyilwe ngeeyadi ezingama-25 zesilika egezwayo entle kunye neeyadi ezingama-50 zetulle, umyili womtshakazi wongeza isiqwenga sokuqala. Oku kunike uTessa idrama awayeyifuna ngaphandle kwabo bonke ubunzima kumtshato wakhe wesiqithi.
Ngelixa ilokhwe yoqobo yayisisiseko esifanelekileyo sosuku lomtshato wakhe, umtshakazi wayenesicelo esikhulu sokwenza ngokwezifiso. Ukongeza imikhono enobuhlalu kunike ingubo yasebukhosini kwisinxibo kwaye yayisisicelo ekwabelwana ngaso esivela kumtshakazi nonina, uWatter wongeza. Bafuna i-beading ukuba ifane nothuli lwe-pixie olufafazwe ecaleni kwekhafu, kwaye umphumo wokugqibela ngokwenene wawungumlingo.
UNksk Hilton omtsha ubhanqe isiqwenga sakhe ngesigqubuthelo esikhanyayo sendlovu nguToni Federici. Wayenxibe isiqwenga seWatters kwisidlo sakhe sokuziqhelanisa-ibhlukhwe yesinxibo sendlovu esine-corset bustier yelace.
Esi sibini sitshatile ngaphambi kwamalungu osapho abathandayo kunye nabahlobo eSaint Barthélemy. Iindwendwe zibandakanya usapho olusondeleyo lomyeni kubandakanya UNicky Rothschild kwaye IParis Hilton kunye nabanye babo ababalulekileyo, kunye Umfazi wasekhaya okwenyani weBeverly Hills UKim Richards Ngubani udade wosapho u-Kathy Hilton. Omnye udade UKyle Richards khange ikwazi ukwenza amatheko omtshato ngenxa yemicimbi yeendaba eqhubekayo yenkqubo yakhe entsha.
Uthando lomama notata omnye komnye luhle kwaye luyakhuthaza. #Iinjongo
Iposi ekwabelwana ngalo ngu IParis Hilton (@parishilton) ngoJuni 4, 2018 kwi-12: 53 pm PDT
Thanda usapho lwam oluhle.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu IParis Hilton (@parishilton) ngoJuni 3, 2018 kwi-4: 01 pm PDT
Iindawo ezikwiholideyokugqibela kwi-budget
usifumana njani isiqinisekiso somtshato
Iidavids zomtshato womtshakazi obhinqileyo